Mactracker dia havaozina manampy ny MacBook Pro vaovao sy fanitsiana | avy amin'ny mac aho
Mactracker fanavaozana manampy MacBook Pros sy fanamboarana vaovao
Ny fampiharana tsara indrindra hahitana amin'ny antsipiriany ny endri-javatra rehetra, ny vidiny, ny daty famoahana ary ny angon-drakitra hafa amin'ny fitaovana Apple dia tsy isalasalana fa Mactracker. Ity rakipahalalana Apple lehibe amin'ny endrika fampiharana ity dia nohavaozina ho an'ny Mac manampy MacBook Pros 14-inch vaovao, 16-inch MacBook Pros ary mazava ho azy fa manampy fanamboarana bug sasany.
Ireo rehetra tsy manana ny fampiharana alaina amin'ny Mac dia afaka manao izany tena malalaka avy amin'ny Mac App Store. Tsy isalasalana fa ny fampiharana tsara indrindra hahafantarana ny antsipiriany rehetra momba ny fitaovana sy rindrambaiko Apple, manomboka amin'ny Apple I voalohany ka hatramin'ny MacBook Pro 16-inch farany.
Ity no fampiharana tokony ho fantatrao momba ny fitaovana Apple rehetra
Ity dia iray amin'ireo rindranasa izay tsy vizaranay nanoro hevitra ahy hoe Mac aho ary ny fampahalalana rehetra ilainao ho fantatra momba ny fitaovana Apple, rindrambaiko na ny toa azy dia ho hita ao. Iray amin'ireo rindranasa napetraka foana ao amin'ny Macs misy ahy io ary manampy ahy amin'ny fotoana maro fantaro ny tsirairay amin'ny antsipirian'ny vokatra avy amin'ny orinasa avy any Cupertino.
mahita vokatra amin'ny laharan'ny famantarana azy, amin'ny daty nanombohana azy teny an-tsena na ny vidiny voalohany miaraka amin'ny toetra sasany amin'ity fampiharana ity. Tsy isalasalana fa fampiharana atolotra tanteraka izany. Afaka mahita isika Mactracker ao amin'ny Mac App Store maimaim-poana. Eto ambany eto izahay dia mamela anao ny rohy mivantana mankany amin'ny magazay fampiharana Mac, fa manana Mactracker ihany koa ianao ho an'ny fitaovana iOS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Mactracker fanavaozana manampy MacBook Pros sy fanamboarana vaovao
Ahoana ny fomba hanafahana toerana amin'ny Mac
Mahazo vola be ny TSMC noho ny Apple